काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यमा डेंगु आशंका, बिहीबार बिहानदेखि अस्पताल भर्ना – Health Post Nepal
काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यमा डेंगु आशंका, बिहीबार बिहानदेखि अस्पताल भर्ना
२०७६ असोज १६ गते १५:०८
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका छन् । शाक्यलाई डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । शाक्यलाई बिहीबार बिहानदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु–क्रस अस्पतालमा राखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मेयर शाक्यलाई ज्वरोलगायत डेंगुका केही लक्षण देखिएका छन्,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइएको छ ।’ उनको उपचारमा डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र डा. त्रिलोकीनाथ गुप्तालगायतको चिकित्सक टोली खटिएको बताइएको छ । यद्यपि मेयर शाक्यको सचिवालय तथा परिवारजनले भने यस विषयमा केही जानकारी दिएका छैनन् ।
६ महिनादेखि महामारीका रुपमा फैलिएको डेंगुले पछिल्लो समय ६७ जिल्लालाई आक्रान्त बनाइसकेको छ भने ११ हजारभन्दा बढी नेपाली संक्रमित भइसकेको अवस्था छ । यसबीचमा सर्वसाधारणदेखि मन्त्रीसम्म डेंगुको चपेटामा आइसकेका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो समय मुलुकको केन्द्रमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सरकारप्रमुख शाक्यमा डेंगुको शंका गरिएको छ । यसअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलगायत डेंगुबाट संक्रमित बनिसकेका छन् ।